Home » ngwaahịa » Laboratory Equipment » Laboratory Centrifuges » refrigerated Centrifuge
Ịgwọ Force elu na-agba onye centrifuge Neofuge 13R enye magburu onwe centrifugal mmetụta na-adị mfe a ga-eji na elu pụrụ ịdabere na nchekwa.
- Oke ọsọ 15000rpm
- Oke ikike 24 × 1.5 / 2.0ml, 16 × 5ml
- okpomọkụ nso -10 ℃ ~ 40 ℃
- atụ ogho ruo 16,000 rpm ka 20.800 × g
- Max. ike nke 400ml
- itinye n'ọkwa mbanye enweghị carbon brushes
- Ike Motors maka obere osooso na braking ugboro
- Broad nso nke ihe nkwụnye na modular ngwa
Ịgwọ Force Neofuge 18R laabu centrifuge, na-enye magburu onwe centrifugal mmetụta na mfe iji na-elu pụrụ ịdabere na nchekwa, na n'ọtụtụ ebe, na-eji na ubi nke molekụla na Biochemical nnyocha, na ọgwụ na nchoputa.
- Obere ọgwụ laboratories
- n'ihi mmiri ọgwụ na molekụla ndu research
- eme analysis na ulo oru laboratories
Ịgwọ Force Neofuge 1600R benchtop laabu centrifuge esetịpụrụ ụkpụrụ ndị na àgwà, imewe, na ọhụrụ na-abịa site a nketa nke ọtụtụ afọ. Neofuge 1600R awade kacha ngwa egosipụta tinyere a elu-ike, n'ozuzu-nzube centrifuge maka cell owuwe ihe ubi; a elu-ọsọ centrifuge maka kewara cell lysates; na a microcentrifuge maka DNA precipitations.
Featuring dị ike, mmezi-free Motors, Centrifuge Neofuge 23R accommodates a dịgasị iche iche nke rotors na spins efere / akpa si 0.2ml ka 4 × 180ml na ala-to-akwa gbapụrụ ọsọ maka a dịgasị iche iche nke ngwa.